, အသံလွှင့်ဘိခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် NAB ပြရန်သတင်း - - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက် Hitachi ဂုဏ်သတင်းနည်းပညာဆွတ်ခူးနှင့်ရှေ့ဆောင်ကင်မရာဖွံ့ဖြိုးရေးအင်ဂျင်နီယာEMMY®ဆုချီးမြှင့်
Home » သတင်း » Hitachi ရှေ့ဆောင်ကင်မရာဖွံ့ဖြိုးရေးဂုဏ်သတင်းနည်းပညာနှင့်အင်ဂျင်နီယာEMMY® Award ဆုကိုဆွတ်ခူးရရှိ
Left-to-ညာဘက်: မစ္စတာ Yoshihiro Shiwa, နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်ကိုယ်စားလှယ်ဒါရိုက်တာ, Hitachi စားသုံးသူအီလက်ထရောနစ် Co. , Ltd မှ .; မစ္စတာ Akio Ito ကမှ Executive Vice နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်အလုပ်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်, Hitachi Kokusai လျှပ်စစ် Inc မှ .; မစ္စတာ Koji Takaichi သမ္မတ & CEO ဖြစ်သူ Hitachi အမေရိကား, Ltd ဓာတ်ပုံ Credit: မာ့ခ် Bryan-Brown ကဓါတ်ပုံပညာ
Hitachi ရှေ့ဆောင်ကင်မရာဖွံ့ဖြိုးရေးဂုဏ်သတင်းနည်းပညာနှင့်အင်ဂျင်နီယာEMMY® Award ဆုကိုဆွတ်ခူးရရှိ
Woodbury, နယူးယော့, မေလ 22, 2019 - Hitachi Kokusai လျှပ်စစ်အမရေိ, Ltd Hitachi ဟာ Single-chip ကိုအရောင်ဗီဒီယိုကင်မရာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုရှေ့ဆောင်များအတွက်ရုပ်မြင်သံကြားဝိဇ္ဇာ & သိပ္ပံ (NATAS) ၏အမျိုးသားအကယ်ဒမီကနေနည်းပညာနှင့်အင်ဂျင်နီယာEMMY®ဆုချီးမြှင့်ခဲ့တာကိုယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
အဆိုပါEMMY®ဆုသည့် 70th နှစ်ပတ်လည်နည်းပညာ & အင်ဂျင်နီယာEMMY®ဆုပေးပွဲ Gala မှာ, Hitachi အမေရိက, Ltd ၏ Koji Takaichi, နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် CEO ဖြစ်သူကလက်ခံခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါဖြစ်ရပ်အတွက်7စဉ်အတွင်း Las Vegas မှာဧပြီလ 2019 ထုတ်လွှင့်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (NAB) နှင့်အတူပူးပေါင်းကျင်းပခဲ့သည် NAB ပြရန်။ Hitachi လေးသူချင်းကိုဗီဒီယိုပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်သူများနှင့်နှစ်ဦးကိုတစ်ဦးချင်းစီ developer များနှင့်အတူဒီဆုချီးမြှင့်မှုအတွက်အသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရသည်။
အဆိုပါနည်းပညာနှင့်အင်ဂျင်နီယာEMMY®ဆုပေးပွဲထုတ်လွှင့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုဂုဏ်ပြုတဲ့။ သူတို့ကရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှုအတွေ့အကြုံအပေါ်တစ်ဦးပစ္စည်းသက်ရောက်မှုအပေါ်သိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ထိုးဖောက်များအတွက်ကုမ္ပဏီများ, အဖွဲ့အစည်းများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီကိုအသိအမှတ်မပြု။
Solid-State Images ၏ထွန်းသည်အထိနှင့် 1982 အတွက်ရုပ်မြင်သံကြားစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကျယ်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့ Hitachi Co-တီထွင်မူပိုင်ခွင့် Saticon ကင်မရာကိုပြွန်ဟာ MOS sensor ကိုအခွပွေု VK-C1000 ကင်မရာ, ပထမဦးဆုံးစီးပွားဖြစ် Single-chip ကိုထုတ်ကုန်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
"ဒီဆုချီးမြှင့်နည်းပညာကိုပထမဦးဆုံး 1982 အတွက်စီးပွားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နှင့်နေဆဲ Hitachi Kokusai လျှပ်စစ်, Inc ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗီဒီယိုကင်မရာများအတွက် operating ဖြစ်ပါတယ်" ဟုမစ္စတာ Takaichi ကသူ့လက်ခံမှုကိုမိန့်ခွန်းတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
Hitachi Kokusai က high-performance ကိုပို့ဆောင်တဲ့ကြွယ်ဝသောသမိုင်း, ထက်ပိုမို 60 နှစ်ပေါင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကင်မရာတီထွင်မှုရှိပြီး, တက်ကြွစွာထိုကဲ့သို့သော High Dynamic Range (HDR) အဖြစ်ထွန်းသစ်နည်းပညာများ Championing စဉ် HDTV, 4K နှင့် 8K ကင်မရာဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများ၏ရှေ့တန်းမှာဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ အဆင့်မြင့်ကင်မရာ sensor များ၎င်း၏ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် 1800 မှာ၎င်း၏ပွဲဦးထွက်ကိုဖန်ဆင်းသောအသစ်သော SK ကို-HD2019 စတူဒီယိုနှင့်ကွင်းဆင်းထုတ်လုပ်မှုကင်မရာ၏စိတ်နှလုံးမှာ၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ် CMOS ပုံရိပ်နည်းပညာနှင့်အတူယနေ့ဆက်လက် NAB ပြရန်.
"ကျနော်တို့ကဆန်းသစ်တီထွင်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့သမိုင်းဂုဏ်ယူဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ကျနော်တို့ Single-chip ကိုအရောင်ကင်မရာနည်းပညာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍများအတွက် NATAS ကအသိအမှတ်ပြုခံရဖို့ဂုဏ်ယူနေကြတယ်" ဟု Toshihiro Matsuzaka, နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် CEO ဖြစ်သူ Hitachi Kokusai လျှပ်စစ်အမရေိ, Ltd "ဟုပြောသည် ကျနော်တို့နည်းပညာသစ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်ယနေ့ပြောင်းလဲနေသောမီဒီယာရှုခင်းအတွက်ထုတ်လွှင့်နှင့်ဗီဒီယိုပညာရှင်များ၏ဖြစ်ပေါ်နေသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြေရှင်းရန်လက်တွေ့ကျတဲ့နှင့်တတ်နိုင်ဖြေရှင်းနည်းများမှာသူတို့ကိုကမ်းလှမ်းအပေါ်ခက်လုပ်ကိုင်ဖို့ဆက်လက်။ "
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး	2019-05-22
ယခင်: crystal Vision ၏အသံနှင့်ဗီဒီယိုများအတွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဘတ်ဂျက်-ဖော်ရွေအယုတ္တအနတ္တနှောင့်နှေးမှုစနစ်ဖြန့်ချိ
နောက်တစ်ခု: LA က Cine ဂီယာကုန်စည်ပြပွဲမှာ Sigma Cine မှန်ဘီလူးနဲ့တင်ဆက်ကြည့်ရှုပါရှိရမည်